Akụkọ Ifo: Akụkọ maka NWA A GỤTARA NA MMIRI - Eastern Reporter
October 18, 2018 October 17, 2018 easternreporter	0 Comments Akuko Ifo, Igbo, Ndigbo
Akụkọ a toro ogologo ma tọkwaa ụtọ nke ukwuu ị gụchaa ya ị ga-esi na ya were mụta ihe.
Akụkọ maka NWA A GỤTARA NA MMIRI
Ifo chapiii!……………………………………. wooo
O nwere otu ụbọchị………………..Otu ụbọchị eruo
Nkịta nyara akpa?………………..nsị agwụ n’ọhịa!
Akụkọ ihe mere gboo gboo, mgbe elu bụ ala ọsa. O nwere nnukwu eze na-achị nnukwu obodo. Eze a nwere akụ na ụba nke ukwu, obodo ya bukwaziri ibu. Ọ lụrụ ụmụnwanyị
asaa, ma nwejuo ndị ohu. Mana otu nnukwu ntụpọ dị na ndụ eze a, ndị nwunye ya nile bụ nanị ụmụnwanyị ka ha mụụrụ ya, o nweghị nke
mụtara ya nwoke ga-anọchi ya na ọ hapụ. Ihe a bụ nnọọ ihe nnukwu ihe mwute nyere onye eze a. Na ndị nwunye asaa a, o nwere nke ọ bara, Mkpọrọmasị. Eze ejighịanya ahụ nwunye ya a, ọ kpọrọ ya asị nke ukwu ruo n’ọkpụkpụ. N’ihe
nke o na-emegbu nwanyị a, ihe na- elu ndị ọzọ anaghị erute ya aka.
Eze gara n’ihu ma rụpụ ụlọ nwaànyị a iche n’ebe ana-aghafu ahịhịa. Eze wepụrụ uche n’ebe ya bụ nwanyị nọ, n’ezie, ọ gụpụrụ ya agapụ. Nke kakwu njọ bụ na o nwekwughi nwa
nwoke. Enweghị nwa nwoke a, na-amị eze
ọbara n’ahụ, etu awnụnta si amị mmadụ ọbara. E mechara, Eze a ga na nke nwa dibịa ka o nyere ya aka. Dibịa ahụ nyere ya mkpụrụ akị
asaa, gwa ya na ya ndị nwunye dịnọkọ, na ha tie ya bụ akị, tufuo akị ma taa ichere akị. Na ọ bụ na ya ka nwa nwoke ha ga-esi were pụta. Mgbe Eze batara, o were akị nye nanị ndị nwunye ya isii, o nweghị nke o nyere, Mkpọrọmasị. Ọ gwakwara ndị nwunye ya, etu ha ga-esi were ta ya bụ akị. Ndị nwunye ya bụ ụmụnwanyị nganga jupụtara ahụ, ndị Eze zụtọchara azụtọcha. Ha jụrụ onwe ha na
mmadụ a na-ahụcha anụ ga taba ọkpụkpụ. N’ihi nke a, ha tiri ya bụ akị, tufucha ichere ya, ma ta nke bụ akị, n’ihi na-ejighị ahụhụ anya isi.
Mgbe ha mechara ihe a, o nwere otu nwa ohu, nke hụrụ Mkpọrọmasị n’anya nke ukwu. Omume Eze na-emeso ya adịghị ya obi mma
chaachaa. Ọ nụkwaziri mgbe Eze na-enye ndị nwunye ya ndụmọdụ otu ha ga-esi were taa ya bụ ichere akị. Mgbe ha tufuchara ichere akị ha
kwesiri ita, nwa ohu a kporo ha nile, kpogala Mkpọrọmasị. N’izu na abịanụ, ndị nwunye Eze asaa tụtara ime. Añụrị jupụtara Eze obi, makana o chee na ha nile ga-amụta nwa
nwoke, belụsọ nanị nke ọ kpọrọ asị. N’ihi nke a, o nyere iwu na onye ọbụla mụtara nwa nwanyị n’obi ya, na a ga-etufu ya bụ nwa. Mgbe ọnwa itoolu gachara, ihe a tụrụ n’ahịa batara. Ụmụnwanyị nile a, mụtara nanị nwa nwanyị.
Mgbe oge ruru Mkpọrọmasị ịmụ nwa, onye ga-
enyere ya aka mụpụta nwa bụ Anasị, kpọrọ ya asị nke ukwu. Nwanyị a wefere obi ya n’azụ,
nwanyị obi mkpume. Mgbe Mkpọrọmasị mụrụ nwa, ọ hụrụ na ọ bụ nwa nwoke, o were ya tufuo. Mgbe Mkpọrọmasị tụgharịrị ka ọ hụ
nwa ọ mụrụ, nwanyi a were osisi kpanye ya n’aka gwa ya na ọ bụ ihe ọ mụpụtara. Kedụ kwanụ ihe Mkpọrọmasị ga-eme, o jiri nwayọọ tukpukwa isi na ụlọ ahịhịa ya. Obere nwa nwoke ahụ ọ mụrụ nke Anasị tụbara na mmiri,
segidere n’elu mmiri ruo na nke otu agadi nwanyị ji isi ama ụkwa. Nwaànyị ahụ, sepụtara nwata ahụ na mmiri, ma kuru ya laa be ya.
Nwa ahụ na-eto bụrụ sọ mma, n’ihi nke ahụ, agadi nwanyị ahụ hụrụ ya n’anya nke ukwu. Ọ naghị ekwe ka nwata ahụ pụta ezi, maka na o
chere na onye ọzọ nwere ike izuru ya bụ nwa. Ọ pụba apụ, o debere ya nri ga-ezuru ya, ma kpochie ya n’ime ụlọ. Mana n’ezie, agadi nwanyị ahụ ma ebe ya bụ nwata si.
Otu ụbọchị, nkịta eze akpara nri garute n’ụlọ ya bụ nwa nọ. Mgbe ọ bịarutere, nwata a ebido gụbara ya egwu a:
Nkịta eze ịchọkwa m o………….Nyaa nyabo
Nna m eze tiri iwu…………………Nyaa nyabo
Amụta nwanyị tufega…………….Nyaa nyabo
Amụta nwoke kpọbata……………Nyaa nyabo
Anasi eze onye iwe…………………Nyaa nyabo
Ahụ nwoke tufega……………….Nyaa nyabo.
Mgbe o gụchara ya bụ egwu, nkịta eze alaa. Mgbe o ruru na nke eze. O bidoro pịaba ya ọdụdụ ya. Mgbe ọbụla nkịta a gara hụ nwatakịrị a, ọ bata opiaba eze ọdụdụ ya. Nke a mere eze jiri nwee mkpebi na o nweriri ihe ya bụ nkịta na-ahụ mgbe ọbụla nke o chọrọ ka ya na onwe ya ga hụkwazie. Otu ụbọchị ya bụ nkịta pụbakwara, Eze were sòchie ya azụ. Mgbe eze garulu were hụ ya bụ ọmalịcha nwa, mma
nwata a bara ya isi. N’ihi nke a, o kpebie na ọ ga-ahụ onye mụtara ya bụ nwa. Ọ bụrụ na onye ahụ ga-ekwe, ka o kponye ya ya, ka ọ zụba ya ka nwa nke ya. Ebe ahụ ka ọ nọ were na-eche,
agadi nwaànyị ahụ tụtara ya bụ nwa were bata. Ọ gara jụọ ya bụ agadi maka ya bụ nwa. Agadi ahụ were kọọrọ ya ihe nile ọ ma maka nwa ahụ, etu o siri tụta ya na mmiri ma kuru ya zụba ya ka nwa nke ya. Nke ka nke, ọ gwara Eze na nwata hụ bụ nwa ya, mana o nwere otu ihe a ga-eme iji mara nwunye eze onye nke mụrụ ya bụnwa. Ihe o gwara Eze ka eme bụ nke a: ndị nwunye Eze asaa ahụ ga-esi nri bupụta, onye ọbụla nwata ahụ riri nri ya bụ ya nwe nwata ahụ.
Eze were kwe ihe agadi nwanyi ahụ kwuru. Ọ kpọrọ ya bụ nwa laa be ya, wee nye ndị nwunye ya isii nnukwu ego. Ọ gwara ha ka ha sie ihe ọbụla masiri ha bupụta. Ọha obodo jupụtara ụbọchị ahụ. Dịka Eze siri kpọọ Mkpọrọmasị asị, o nweghị ego ọbụla o nyere ya ka o were sie ihe ọbụla. Ndị nwunye ya isii ahụ sichara nri na-ekpozu ebe nile ụbọchị ahụ. Onye ọbụla bịara ụbọchị ahụ, asọmmiri na-agụsịsi ha n’ọnụ maka ọmalịcha ikpo nri ahụ. Mana kedu ihe nwaànyị Eze kpọrọ asị siri? O ji anụ ngwere na oke were sie nke ya. O buuru nri nke ya, dọba n’ebe di anya, na-abụghị ebe ndị ọzọ debere nke ha. Oge ruru, ụzụ atụọ ebe nile. Onye ọbụla chi uche n’aka makana ụbọchị ahụ abụghị obere ụbọchị. Eze nyere iwu na onye ọbụla nwa ahụ erighị nri ya, na aga egbu onye ahụ. Onye nwata ahụ riri nri ya, nanị ya ga-abụ nwunye ya. E kere nwata ahụ ọmalịcha ekike, i hụ ya, ị mara na nwaeze ruuru ya. O pụtara, gafee nri nke onye nke mbụ, a kpụrụ ya gbuo. Ihe a ka o megidere gafesịa ọmalịcha nri ikpo ọma, ndị nwunye eze isii a siri. Ka o na-agafe nke ọbụla, ka aka na-akpara nke ahụ.
Nwata ahụ were nwayọọ ga ebe nri nke e ji ngwere na oke dị, nọrọ ala, bido ribe ihe nile ọ hụrụ n’uko ahụ. Onye ọbụla ị hụrụ ụbọchị ahụ,
mgbe nke a na-eme, tiwechara agba ha oghe. Mkpọtụ jupụtara ebe nile ụbọchị ahụ. Eze mapụta, magburu Mkpọrọmasị, kpọrọ ya ga saa ya ahụ ọsịsọ, yibe ya ọmalịcha akwa. Eze bidoro n’isi zụtara ya ihe nile o na-enyebu ndị nwunye ya ndị ọzọ ahụ. Zụtara ya ma ọlaedo na
ọlaọcha. Mkpọrọmasị mechara bụrụ, Mhụrụnanya. Nanị ya bụ onye mejupụtara ihe Eze chọrọ maka inweta nwa nwoke, maka na o
Bido n’ụbọchị ahụ, Eze kpọbatara ya n’ụlọ ya. Ihe nile ọ chọrọ bụ nke Eze mere ka o ruo ya aka. Ha bidoro bibe ka ezigbo di na nwunye
n’ifụnanya ruo ngwụcha ndụ ha. Mgbe eze mechara nwụọ, nwatakịrị ahụ bụrụ Eze.
Chakpii !!! wọọ !!!.
← Sitting arrangement disagreement: Akpabio asks Saraki to resign
Mentally challenged persons evacuated from the streets of Anambra State →